काठमाण्डौ - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका खतिवडाले आइतबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले सरकारी सञ्चार माध्यम देशभरका जनताको साझा माध्यम भएकाले सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारी सञ्चार माध्यमले सरकारको मात्रै गुणगान गाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले नराख्ने उल्लेख गर्दै खतिवडाले राज्य सञ्चालनमा जनताले निर्वाह गर्ने भूमिका र त्यसले समावेशी विकासमा पुर्‍याउने योगदानलाई मध्यनगर गर्दै सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडाको पुन: प्रवेश
२१ फागुन, काठमाडौं । बुधबार पुन: अर्थमन्त्रीमा नियुक्त डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ लिएपछि उनले अर्थ मन्त्रालयमा आई पदभार ग्रहण गरेका हुन् । उनलाई अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वागत गरेका थिए …
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाद्वारा मन्त्री पदबाट राजिनामा
अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ ।
काठमाडौं :सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्न पुगेका मन्त्री खतिवडाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा दुवै खालका कामको जानकारी जनतामाझ पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चारमाध्यमले राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रो कामलाई राम्रो&nb...
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खतिवडाले आइतबार पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
११ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले आइतबार मन्त्रालयमा पुगी संचार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । ७० करोडको कमिसनको अडियो प्रकरणपछि सूचना तथा …
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा डा. खतिवडाले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्ना मान्यता अनुसार अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने बताएका छन्। खतिवडाले निरन्तर राज्यको सुपरिवेक्षणमा खुल्ला बजारको वकालत गर्दै आएका छन्। सपथ लगत्तै अर्थमन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै खतिवडाले आफ्ना मान्यताहरु कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्। 'पदमा रहँदा र नरहँदा पनि मेरा केही मान्यताहरु छन्। ती मान्यताहरु हामीले अपनाउँदै आएका निति भन्दा धेरै टाढा छैनन्', खतिवडाले कर्मचारीहरुलाई…
अर्थमन्त्रीमा पदभारपछि डा. युवराज खतिवडाले भने: अर्थतन्त्र बलियो नभइ मिडिया चल्न सक्दैन :: Pahilopost.com
अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडाले गरे पदभार ग्रहण, हेर्नुस् तस्बिर समाचार :: BIZMANDU.COM